Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKWIKWỌ ASIAN Ndị na-egwu bọọlụ Oceania Mathew Ryan nwa akwukwo n'akwukwo nke oma
Ihe omuma anyi Ryan Ryan agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezin’ulo ya, nwunye ya (Ann), nwatakiri, ndu onwe onye, ​​ndu ya na uzo ya.
Na nkenke, anyị na-enye gị Full Story of the Australian professional footballer best known as Maty. Lifebogger na - amalite Bio site na Ryan mgbe ọ bụ nwata rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama na egwuregwu mara mma.
Iji mee ka agụụ autobiography gị sie ike na ọdịdị nke Mat Ryan's Bio, anyị ewepụwo oge anyị iji nye gị ụlọ ahịa Early Life to Success. Obi abụọ adịghị ya, ọ na-akọ Akụkọ ya.
Biography nke Mathew Ryan. Hụ ndụ nwata ya na Ọganiihu Akụkọ.
Ee, onye ọ bụla maara ọ bụ onye na-eche nche na egwuregwu. Mathew Ryan bụ onye ama ama maka mmegharị uche ya pụrụ iche, ịdị gara gara, yana ikike ịkwụsị ọgbụgba n'etiti posts.
N'agbanyeghị otuto ndị a, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-akwado egwuregwu bọọlụ maara akụkọ ndụ ya. Anyị ewepụtala oge iji kwadebe Mathew Ryan Bio - maka ịhụnanya maka egwuregwu ahụ. Ugbu a, na-ebughị ụzọ, ka anyị bido.
Mathew Ryan Akụkọ nwata:
Maka ndị na - ebido Biography, ọ na - aza aha nickname - Mat ma ọ bụ Maty. Mathew David Ryan mụrụ na 8th nke Eprel 1992 na nne ya, Carol Ryan na nna, David Ryan na Town of Plympton, Australia.
Onye na -eche nche na Australia bịara n'ụwa dịka nwa mbụ na nwa n'ime ụmụ abụọ - Mathew (ya onwe ya) na Megan, amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya.
Anyị nwere ebe a, ọmarịcha eserese Premier League Goalie na nne ya (Carol Ryan) ndị nwere ike nọrọ na ngwụcha afọ 50 - n'oge ha sere foto ahụ.
Zute otu n'ime nne na nna Mathew Ryan - nne ya, Carol.
Onye bụbu onye mgbaru ọsọ Brighton gwara ndị na -eso ụzọ Instagram ya otu oge - na ọ nọrọ ụbọchị mbụ ya dị ka nwata nwere ọ joyụ. Anyị chọpụtara na ọ bụ eziokwu.
Dị ka obere nwa, Maty enweghị otu nchegbu maka ụwa ya. Ọ na -atụ uche ụbọchị ochie ndị ahụ dị mma, nke ọ na -enweghị ike ịlaghachi azụ.
Mathew Ryan sere ebe a dika nwa obi uto. Mụ na Megan, ha abụọ nwere ọmarịcha oge nwata.
Ọzọkwa, ọ na-atọ ụtọ ịmara na onye nchebe nke Australia etoliteghị naanị ya. Enweghị Megan Ryan - nwanne ya nwanyị nke ọ tọrọ - obere oge gaara enwe isi. Siblingsmụnne nwoke abụọ nwere mmekọrịta siri ike kemgbe ha bụ nwata.
Ezigbo ezinụlọ Ryan:
Ịgafe nwata na ezi na ụlọ nwere ọ happyụ dị ka ịnweta ụdị eluigwe mbụ. Nke a bụ ụdị Mathew Ryan. Onye mgbaru ọsọ Ex-Brighton sitere na ezinụlọ dị umeala n'obi.
Nnyocha na -egosi na onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ ya - Mama, nne na nna ochie, nwanne nwanyị - dị umeala n'obi, na -akpa agwa nke ọma, na -akwanyere ndị mmadụ ugwu ma na -agụkwa akwụkwọ nke ukwuu.
Nke a bụ nkọwa doro anya banyere ezinụlọ na-ebikọ ọnụ. Maty nwere obi uto inwe ha.
N'ụzọ na -akpali mmasị, ebe o si - Plumpton - dị ezigbo anya na Europe na UK. Plumpton bụ kilomita 46 n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke mpaghara azụmahịa etiti Sydney.
Dabere na Wikipedia, Mat nwere nsọpụrụ dị ka onye egwuregwu bọọlụ kachasị nwee mmeri site na obere obodo a.
Maapụ a na-akọwa ezinụlọ ezinụlọ Mathew Ryan. O si n’otu n’ime obodo ndị kacha umeala n’obi n’Australia.
Mathew Ryan Mmụta:
Peeping n'ime akwụkwọ akụkọ tabloid nke Australia (The Tele), anyị chọpụtara - na ọ gara Westfields Sports School na Sydney. Ndị nne na nna Mathew Ryan debara aha ya n'ụlọ akwụkwọ ahụ n'ihi na ọ hụrụ football n'anya.
N'ịga n'ihu nyocha, anyị ghọtara - na Westfields Sports High School bụ ụlọ ọrụ gọọmentị na-akwado ego. Educationlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ahụ dị na Fairfield West, nke ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ nke Sydney, New South Wales, Australia.
Mathew Ryan Biography - Akụkọ Mgbaru Ọsọ:
Ọchịchọ ịbụ Shot-Stopper bidoro mgbe ọ dị afọ anọ. N'oge ahụ, Ryan gosipụtara maka ọtụtụ ndị otu amateur.
Mgbe ọ dị afọ iri, ọ malitere itinye akwụkwọ maka ule n'ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ dị nso. Marconi Stallions, obere ụlọ akwụkwọ sekọndrị - nkeji 40 nkeji site n'ụlọ ezinụlọ ya nabatara ya mgbe ọnwụnwa gara nke ọma.
Nke a bụ ebe ọ malitere maka obere Mathew.
Mgbe ọ na -eru afọ iri na isii, Mat nwere mmetụta ịkwaga ụlọ akwụkwọ ka ukwuu. Ọrụ mbụ ya bụ ịchekwa ngụsị akwụkwọ agụmakwụkwọ dị larịị ma nweta ohere ịgba bọọlụ Europe.
N'afọ 2008, Maty hapụrụ klọb Marconi Stallions nwata ya maka onye ọzọ - Blacktown City - ebe ọ nọrọ otu afọ.
N'ikpeazụ, o jiri klọb dị iche wee nweta ngụsị akwụkwọ ntorobịa ntorobịa ya na-atụ anya ya ogologo oge.
N'ịhụ enweghị ohere otu egwuregwu mbụ, ọ laghachiri klọb ochie ya-Blacktown City ebe ọ ghọrọ onye mgbaru ọsọ otu mbụ ha. Ya na klọb ahụ, Mat nwere mmalite kachasị mma na ndụ ọkachamara ya.
Mathew Ryan, ozugbo ọ gụsịrị akwụkwọ na agụmakwụkwọ.
Mathew Ryan Biography - tozọ a ma ama Akụkọ:
Na-alụ ọgụ maka ohere ịgba bọọlụ Europe, onye na-eto eto na-eche nche chere na ọ chọrọ mgbanwe. Ọ hapụrụ Blacktown City ebe ọ bụ onye mbụ na-ahọrọ ha ịkwụsị na klọb ochie ya (Central Coast Mariners) - ebe ọ zutere asọmpi dị egwu.
Mathew Ryan jiri ndidi mee ihe mgbe ọ laghachiri na klọb ochie ya (Central Coast Mariners) dị ka onye na-anọchite anya ya. O tinyere ọtụtụ ndidi mgbe ọ na-eche ka onye na-eche nche karịa ya.
Nwa nwoke ahụ dị umeala nọ ọdụ n'oche ahụ. O jiri ndidi chere ka ọ bụrụ nhọrọ mbụ.
Otu o si bụrụ onye mbu choro Central Coast Mariners:
N'ime oge 2010-11 Australian A-League, Mathew Ryan nwetara ohere ọ nọ na-atụ anya ime aha ya na mpempe akwụkwọ otu mbụ.
Nke a mere n'otu oge onye nchekwa bọọlụ nke Central Coast Mariners, Jess Vanstrattan, nwere mmerụ ahụ dị n'ọkpụkpụ azụ.
Mgbe mmerụ ahụ gasịrị, Ryan nwetara oku iji gosi na ya bụ onye mgbaru ọsọ Number 1. O mere nke ahụ, na -enwe nnukwu ntụkwasị obi na egwuregwu egwuregwu ya.
Ka emechara ọtụtụ ihe ngosi dị egwu, nwa anyị nwoke dị mkpa karịa onye mgbaru ọsọ mbụ klọb, Jess Vanstrattan. Nke ahụ buliri Ryan elu na iri na otu ndị otu.
Nke a bụ Maty Ryan, na-emere onwe ya aha ma gosipụta na ọ bụ onye nchebe kachasị mma na klọb ya.
Ohere na Ohere Europe:
Ryan gara n'ihu na -eme ọmarịcha arụmọrụ ya, ọbụnadị na -eti asọmpi nke ndị na -eche nche ọhụrụ bịanyere aka na ya bụ ndị nwara ịchụpụ ya.
Idebe ntụpọ ya n'usoro mmalite, o nyeere ndị otu ya aka imeri A-League Premiership (iko bọọlụ kacha elu nke Australia).
N'oge emume mmeri ya, Mat enweghị ike ịgbanahụ nnukwu ụgwọ ịhụnanya sitere n'aka ndị na -akwado ya.
Ryan duuru ndị otu ya gaa ọtụtụ oge mara mma. Ọ fọrọ nke nta ka ndị Fans lie ya.
Dị ka kpakpando na-ebili, ọ nwetara ọtụtụ onyinye gụnyere nsọpụrụ ugboro abụọ nke afọ. Ihe ndekọ ya na ndị ọkwọ ụgbọ mmiri Australia mere ka a mara mba ahụ.
Maka ọ joyụ nke ezinụlọ ya, o nwekwara ọkpụkpọ oku otu mba.
Mgbe ọ ghọsịrị etiti klọb A-League nke abụọ nke klọb ahụ, onye na-eche nche na-ebili mechara nweta uche Europe.
Club Brugge (ụlọ ọrụ egwuregwu bọọlụ ọkachamara na Belgium nke dị na Bruges na Belgium) bịanyere aka na Ryan na 30th nke May 2013. Na nke mbụ, ọ hapụrụ ụlọ, nne na nna ya na nwanne ya na kọntinent ọzọ.
Mathew Ryan Bio - Akụkọ nke :ga nke Ọma:
Luck soro ya na Belgium ka ọ ghọrọ igwe mmadụ kacha amasị ekele maka usoro akwụkwọ ọcha na ngosipụta dị ebube.
Ọ meriri onye mgbaru ọsọ Belgium Pro League nke afọ - oge abụọ n'usoro. Lee otu n'ime ncheta kacha mma na Jupiler pro-league, n'oge ememme iko 2014/2015 Belgian.
N'ihi eziokwu ahụ ọ dị mma, Club Brugge nyere Ryan ọrụ ọhụrụ ọ ga-eweta ezigbo ụgwọ, mmụba ụgwọ, yana ndọtị nkwekọrịta. Ha mere nke a iji gbuo mmasị ya ịkwaga na klọb buru ibu dịka Liverpool chọrọ ya.
Na 21 July 2015, Valencia jidere Ryan maka nkwekọrịta afọ isii. Na klọb, Goalie ọhụrụ zutere asọmpi. Goalie nke Brazil nyere (Diego Alves) nye ya oge siri ike. Iji mee atụmatụ, Ryan chọrọ mgbazinye ego na Racing Genk ebe ọ nwetara nhọrọ ndị otu mbụ - ozugbo.
Ihe dị ka June 2017, Premier League nabatara Mathew Ryan ka ọ bịanyere aka maka Brighton & Hove Albion ọhụrụ a kwalitere. N'ihi ahụmahụ, ya n'akụkụ Aaron Mooy (nwanne) - na otutu ndi ozo - nyere aka igbochi ulo ndi Sussex ka odigide.
Mgbe oge atọ gara nke ọma na ndị Oké Osimiri Seagulls, nwoke ahụ hụrụ ihe ịma aka ọhụrụ n'anya malitere ịchọ ịkwalite onwe ya elu. N'ikpeazụ, onyinye ziri ezi bịara. Arsenal gbaziri onye bọọlụ Brighton bụ Mathew Ryan rue ogwugwu oge 2020/2021. Mgbe Ryan sonyeere ndị Gunners, Ryan mere ka ndị agbụrụ ahụ mata na Arsenal bụ ụlọ nwata.
Na ọdịda nke Emiliano Martínez ịma aka Bernd Leno maka ebe na-adịgide adịgide na-adịgide adịgide, echiche mbụ Ryan nwere na uwe elu Gunner na-ekwu ọtụtụ ọrụ ya. You maara?… Ọ bụ Facebook peeji nke Arsenal mere ka ndị agbụrụ mara ihe mere o ji banye na klọb ahụ.
Nke a bụ ihe Arsenal kwuru gbasara Maty Ryan.
A hụrụ Maty n'anya nke ukwuu, dị ka ndị ama ama ama ama Australia Mile Jedinak. Ihe ọ bụla ọdịnihu ga -adịrị ya, Lifebogger na -achọrịrị ya ihe kacha mma. Ndị ọzọ, dị ka anyị na -ekwu maka akụkọ ndụ ya, bụ akụkọ ugbu a.
Mathew Ryan Lifehụnanya Ndụ - Single, Girlfriend, Nwunye?
N'azụ goalie na-aga nke ọma na-abịa nwanyị mara mma nke bụ di ya. Dabere na Blog Magazine Blogs, Anna bu aha nwunye Mathew Ryan.
Nwunye Mathew Ryan, Anna.
Onye Nlekọta Goceroos na-asọpụrụ mkpebi nwunye ya nke ịghara ịpụta n'ihu ọha. N'ihi nke a, anyị amachaghị banyere Ann Ryan.
Mathew Ryan Ndụ Nke Onwe:
Ewezuga oru ya dika Onyenchekwaebumnobi, gini ka imaara banyere ya? N'ebe a, anyị ga-amata gị banyere àgwà nwoke mara mma ma dị jụụ, nke ụwa bọọlụ hụrụ n'anya.
Tingmata Ndụ Ndụ nke Mathew Ryan.
Forhụnanya maka Nnukwu nwamba:
Maka ihe nkwụsị Arsenal, Ọdụm na agụ dị egwu ma mara mma n'anya ya. Ọ dịghị afọ na-agabiga n’enweghị Matga leta Catlọ Nsọ Nnukwu Nnukwu Osimiri dị na Ashford, obodo dị na mba Kent, England.
Mathew Ryan bụ nnukwu onye na-anụ ọhịa.
Anyị nwere vidiyo nke gosiri ahụmịhe ọhụụ Maty nwere na anụ ọhịa; ya bu Odum, Agu, na otu Black Cat. Onye na-eche nche Arsenal na-ewepụta oge ileba anya na okike - nke ọ hụrụ n'anya n'obi ya.
A Dog n'anya:
Ọtụtụ n'ime anyị hụrụ anụ ụlọ n'anya, Mathew Ryan abụghịkwa otu. Goalie nwere nkịta na -egwu egwu ma na -atọ ụtọ ilele.
Vidiyo dị n'okpuru na -akọwa mmekọrịta Ryan na ezigbo enyi ya na onye otu ezinụlọ ya. Nkịta ya bụ nwanyị, a na -akpọkwa ya Millie.
Mathew Ryan Web Ndụ:
Nwaafọ Plumpton na-eme omume ndị dị oke mkpa maka ndụ dị mma. Na-egbochi ịkwụsị ndị ịgba ọsọ ụkwụ site na ịme ihe mgbaru ọsọ, Mathew dịkwa mma na Tenis na Golf - ihe omume ntụrụndụ ya nke abụọ.
N'oge oge egwuregwu bọọlụ, ọ na-ahọrọ ịga ebe ezumike ezumike. Site n'ihe ọ dị ka ijide nnukwu azụ bụkwa oge akara ahịa. Nke a bụ Mathew Ryan nwere nnukwu tuna tuna dị kilogram 88 n'arọ - ikekwe nnukwu ihe o jidere.
Mathew Ryan hụrụ n'anya ka ha nwee nnukwu.
Kedu ụgbọ ala ọ na-anya?
Mathew Ryan bụ nnukwu onye na-agba ụgbọ mmiri - ihe ọ na-ebugharị. Knowsnye maara, ma eleghị anya ọ ga-arụ ọrụ a mgbe ezumike nká football.
Nke a bụ ntụzi aka banyere ihe ọ nwere ike ịbanye mgbe ọ lara ezumike nká.
N'ihe ndekọ ọzọ, ọ hụrụ njem ezumike gaa n'akụkụ ọdịda anyanwụ, ya bụ Los Angeles. Anyị na-ahụ ya ebe a n'otu n'ime ezumike ndị ahụ na LA.
Maty Ryan na enyi ya nọ n'ụgbọ ala mara mma.
Ndụ Ryan Ezinụlọ:
O doro anya na ọ na -ewere ịhụnanya miri emi maka ezinụlọ ya dịka ngọzi kasịnụ nke ndụ. Onweghị ego ego bọọlụ nwere ike were oge ya na ezinụlọ nuklia ya na -adọrọ adọrọ.
N'ebe a, Lifebogger na -abanye n'ime eziokwu gbasara nne na nna ya, nwanne ya nwanyị, na nne na nna ya ochie.
Ọ dịghị ihe dị mkpa karịa ezinụlọ nwere obi ụtọ.
Banyere Mathew Ryan:
Carol, nne ya, wetara nnukwu obi ụtọ n'oge ọ bụ nwata. Maka nke a, Goalie anaghị akwụsị ime ya ememme.
Mathew Ryan bụ ụdị onye hụrụ inwe ihe nkiri n'anya na isoro nne ya na -anọkọ. Anyị nwere vidiyo ebe ọ gosiri ndị egwu ụzọ nke ya iji mee ncheta ụbọchị nne.
Aha ya bụ David Ryan na ọ dị nwute, ọ dị ka ọ nweghị na ndụ nwa ya. Enweghi akwụkwọ gbasara nna Mathew Ryan.
Foto nna ya adịghị na akaụntụ mgbasa ozi ọhaneze ya, nke nwere ọtụtụ ndị ezinaụlọ nọchitere anya ya. Ọ na -eme ka anyị mata na ọ nwere ike ịla oge ma ọ bụ ghara ịlụ Carol Ryan.
Banyere Nwanne Nwanyị Mathew Ryan:
Megan Ryan nwere obi ụtọ inwe nwanne nwoke na Mathew.
Megan bụ otu n'ime mmadụ abụọ (Carol mama ya bụ otu n'ime ha) ndị nọ ya n'akụkụ site na ụbọchị mbụ. Ya adịla mgbe ị ga-eji oge ndị ezinụlọ atọ a tụlee onwe ha ezigbo ndị enyi.
Megan, Maty, na Carol nwere otu ihe. Ọ bụ ịhụnanya ha maka ikiri egwuregwu tenis LIVE. Ọ na -atọ ha ụtọ ikiri egwuregwu ahụ n'ụlọ ikpe etiti Wimbledon. Anyị na -ahụ Trio ebe a na -anụ ụtọ egwuregwu Federer na Djokovic.
I nweghi ike iwepu Tenis n’ime ihe atọ ndị a.
Mathew Ryan na nne na nna ochie:
Ha ka bụ nnukwu nkwado ọrụ ya, onye Onye Onyenchekwaebumnobi enweghị ike ikele nke ọma. Nna nna ya emeela ya na ezinụlọ ya ọtụtụ ihe.
N'agbanyeghị nnukwu oge dị n'etiti Australia na UK, ha abụọ mụrụ anya na -ekiri ọtụtụ egwuregwu nwa nwa ha. N'ebe a, nne nne na Pa ji ọ joyụ hụ ya n'ọdụ ụgbọ elu.
N'ihi ihe ịga nke ọma nke Mathew, ndị Grannies enweghị obi abụọ biri ndụ zuru oke. N'ebe a, ha hụrụ ya n'ọdụ ụgbọ elu.
Eziokwu Mathew Ryan:
Na ngalaba mmechi nke Biography anyị, anyị ga-enyekwu gị eziokwu gbasara Socceroos Shot-Stopper. Ka anyị bido n’echiche ihe osise ya dị ịtụnanya.
Eziokwu # 1 - Mathew Ryan igbu:
Ileba anya na ink na obi ya na-ekpughe otu n'ime nwamba nwamba kachasị amasị ya. O doro anya na Mathew Ryan nwere isi nke tattoo igbu anụ na aka ekpe ya. Ozu a na-egosi ike ya, ike ya, obi ike ya na ebumnuche ya.
Matatt Ryan's Tattoo na-agwa ọtụtụ ihe gbasara onye ya.
More na egbugbu, na gburugburu ubu aka aka Maty, nwere egbugbu Rhino. Ihe nka a gosiputara ume ya, ihe ya, ume ya, ike ya, ntachi obi ya, ntachi obi ya na ike ya.
N'oge a na-ese aka aka ya, Ryan gbara mbọ hụ na eserese usoro ahụ. Lelee ya dịka ọ na - adọrọ mmasị - oge ịse egbugbu.
Eziokwu # 2 - Nchekwa Onu Mmiri:
Banyere ihe omume ntụrụndụ ya, Ryan nwere mmasị ịme ikuku mmiri. Omume nke idobe ihe na mmiri bụ otu n'ime usoro cardio ya kacha mma. Ọ bụ ụzọ nke aka ya ifelata ma mepụta ahụ na -eguzogide ya. Nke a bụ vidiyo.
Eziokwu # 4 - Nzọpụta Ndụ Ndụ:
Mmesapụ aka ya na nnapụta na ịhazigharị anụ ọhịa abụghị nke abụọ. N'ime oge 2019/2020 Australia na-agba ọkụ, Mathew Ryan nyere $ 500AUD (ihe dị ka € 310) ka ndi-ọhia b theyaputara ha n'ọku.
Eziokwu # 4 - N'iji hisgwọ ọnwa ya na Nkezi Obodo:
Agba ụgwọ ọnwa
Kwa Afọ: £ 1,820,000
Ọnwa kwa: £ 151,666
Kwa Izu: £ 34,946
Kwa :bọchị: £ 4,992
Kwa elekere: £ 208
Nkeji nkeji: £ 3.4
Kwa Nke Abụọ: £ 0.06
Ebe ọ bụ na ị malitere ile Mathew Ryan'Bio, nke a bụ ihe ọ rụpụtara na Arsenal.
Ebe o si (Australia) bịa, nwa amaala (na-enweta 90,800 AUD kwa afọ) ga-arụ ọrụ maka afọ 36 iji nweta ụgwọ ọrụ Mathew Ryan na Arsenal.
Eziokwu # 5 - Mathew Ryan's Net Worth:
Onye na -eche nche n'Australia enwetala ahụmịhe ọrụ afọ iri site na 10 ruo 2009. Onye nnọchi anya Mathew Ryan bụ Beckster SPRL - ụlọ ọrụ nwere Lucas Digne dị ka onye ahịa kachasị ha.
Site na ha, Goalie etinyela ọtụtụ nde ụgwọ ọnwa na nkwekọrịta nkwado n'ime oge a. Lifebogger na -eme atụmatụ na ọnụ ahịa Mathew Ryan (2021) ga -adị nde pound isii.
Eziokwu # 6 - FIFA FIFA stats:
Njirimara Mat Ryan Goalkeeper na usoro egwuregwu vidiyo EA dị oke egwu. Akara nke 78 na 80 nwere ike yie ihe na -ezighi ezi maka nwoke akpọrọ dịka otu n'ime ndị na -eche nche kacha mma na Premier League.
Eziokwu # 7 - Okpukpe Mathew Ryan:
Onye Onyenchekwaebumnobi so na 52% nke ndị Australia na -ekpe Iso Ụzọ Kraịst. Ọzọkwa, na -ekpe ikpe site na eziokwu na aha mbụ ya na nke etiti bụ Mathew na David, enwere nkwenye siri ike na nne na nna Mathew Ryan zụlitere ya ịbụ Onye Kraịst.
Tebụl Wiki anyị na-enye azịza ọsịsa maka ajụjụ metụtara Biographical gbasara Onyenchekwaebumnobi nke Australia.
Aha zuru ezu: Mathew David Ryan
Aha otutu: Mati, Mat
Age: 29 afọ na ọnwa 9.
Ụbọchị ọmụmụ: Thbọchị 8 nke Eprel 1992
Ebe amụrụ onye: Plumpton, New South Wales, Australia.
Ndị nne na nna: Carol Ryan (Nne Mat Ryan) na nna, David Ryan (Nna Ryan)
Ụmụnne: Megan Ryan
Nwunye: Ann Ryan
elu: 1.84 mita ma ọ bụ 6 ụkwụ 0 sentimita asatọ
-arụ: Onye na-echekwa bọọlụ
Onye nnọchite anya: Ụlọ ọrụ Beckster SPRL
Education: Filọ akwụkwọ sekọndrị egwuregwu Westfields.
Ihe omume: Tenis, Golf, Azụ, anụmanụ na anụ ọhịa
Pet Aha: Nwanyi Nkita (Millie)
Marconi Stallions, Blacktown City na Central Coast Mariners
Akụkọ Mathew Ryan malitere na Plumpton, obere ime obodo dị na mpaghara ọdịda anyanwụ Sydney. Nke a bụ ebe o kpebiri, egwuregwu ahụ ga -abụ akụkụ bụ isi nke ọdịnihu ya.
Site na nkwado nke ezinụlọ ya (nne -Carol, nwanne nwanyị -Megan, na nne na nna ochie), o mezuru ebumnuche ya.
Akụkọ banyere Mathew Ryan na -eme ka anyị ghọta ezi ihe dị na inwe asọmpi ahụike na egwuregwu. Site na ịsọ mpi megide ndị mgbaru ọsọ ibe ya, Mathew ghọrọ ụdị ka mma. Ndị Ọstrelia na -akwanyere ya ugwu dị ka Tim Cahil, Mark Viduka, na Harry Kewell.
Daalụ maka iwepụta oge gị ịgbari Memoir a gbasara Mathew Ryan. Anyị na-eche banyere izi ezi nke akụkọ ndụ anyị dere Ndị ọgba bọọlụ Oceania. Jiri obiọma mara anyị, ọ bụrụ na ị hụ na ihe na-adịghị ele anya na isiokwu nke Mathew Ryan's Bio.